Maxaa ka jira in Fahad Yaasiin, Agaasime Kuxigeenka Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka, uu si beenabuur ah ku qaatay baasaboorka Kenya? (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 23, 2018 8:55 g 0
Warbaahinta dalka Kenya ayaa beryahan si weyn u hadal-haysey in Agaasimihii hore ee Madaxtooyada Soomaaliya, iminkana ah gaasime Kuxigeenka Hay’adda Nabbadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), inuu si beenabuur ah u samaystay, laguna siiyey baasboorka dalka Kenya.
Docda kalena waxaa jira warar sheegaya in arrintaasi tahay mid siyaasadeed, ayna ku lugleeyihiin sirdoonada Imaaraadka, reer Galbeedka, iyo waliba kuwa Sacuudiga, maadaama Md. Fahad Yaasiin uu kamid yahay xubnaha sarsare ee ugu saamaynta badan dawladda Madaxweyne Farmaajo, hormuudkana u aha siyaasadda Qadar ee ammuuraha Soomaaliya.
Md. Fahad ayaa hore uga soo shaqeeyey dalka Qadar iyo talafishanka aad loo dhaliilo ee AlJAZEERA.
Hadaba si aan arrimahan xog badan uga helno waxaan la xiriirnay Danjire Maxamed Maxamuud Caalin, waxa uuna u warramay Axmed Sh. Maxamed Tallman oo ku sugan studiyeheenna Daljir Bossaso.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20789
Dowladda Soomaalida ee Itoobiya oo magac iyo calan cusub yeelatay (dhehayso)